उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका गगन थापादेखि मुकुन्द न्यौपानेसम्म चुनावी मैदानमा सक्रिय
जनतापाटी शनिबार, मंसिर ६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । देशको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन आउन केही दिन वांकी छ । चुनाव जित्नको लागि उम्मेद्वारहरु मतदाता रिझाउन मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिझाउन पनि मरिमेटेर लागिरहेका छन् ।
महासंघ विशुद्ध व्यवसायिक संस्था भए पनि चुनाव जित्नको लागि प्रमुख राजनीतिक पार्टीको ‘आर्शिवाद लिने’ प्रचलन विगतमा जस्तै यसपटक देखिदैंछ । खासगरि सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताहरु नै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा महासंघको निर्वाचनमा सक्रिय हुने गरेका छन् । अन्य व्यवसायिक संस्थाको तुलनामा उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेपाली कांग्रेसको तुलनामा नेकपा निकै कमजोर रहंदै आएको छ । त्यसैले नेकपाका प्रतिवद्ध उम्मेद्वारहरु पनि कम रहेका छन् ।
महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार महासंघमा नेकपाको हैसियत करिब ३० प्रतिशत मात्रै हो भने ७० प्रतिशत नेपाली कांग्रेसको कब्जा छ । महासंघका ११३ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु मध्ये केवल २८ वटा संघको नेतृत्वमा नेकपाका कार्यकर्ताहरु रहेका छन् भने करिब ८० वटाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका छन् । ५ वटा भने अन्य पार्टी समर्थक रहेको बताइन्छ ।
वस्तुगततर्फ १०३ वटा संस्थाहरु महासंघको सदस्य रहेकोमा केवल १८ वटा संस्थामा मात्र नेकपाको दवदवा रहेको छ । वांकी अधिकांशमा नेपाली कांग्रेस समर्थक र अपवादमा एक दुईवटा संस्थामा अरु पार्टीका कार्यकर्ताहरुको बोलवाला रहेको छ ।
महासंघ र त्यस अन्तरगतका संस्थाहरुमा आफ्नो कमजोर उपस्थितिलाई बुझेर नै नेकपाले महासंघमा उम्मेद्वार रहेका आफ्नो पार्टी सदस्यहरुलाई जसरी पनि जिताउने र त्यो वाहेकको अवस्थामा अरु पार्टीमा रहे पनि सक्रिय नरहेकाहरुलाई जिताउने र खासगरि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रभाव जमाएकाहरुलाई भने जसरी पनि हराउने नीति लिएको छ । त्यहीकारण वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानलाई हराएर चन्द्र चन्द्र ढकाललाई जिताउने अभियानमा नेकपा लागेको छ । किशोर प्रधान जस्तो ‘कट्टर कांग्रेस’ नभएकोले ढकाललाई भोट हाल्ने निर्णय गरिएको नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले जनतापाटीसंग भने ।
‘चन्द्र ढकाल चतुर व्यवसायी भएकोले सबै पार्टीसंग उत्तिकै सम्वन्ध राखे पनि उनी प्रधान जस्तो कांग्रेस छाप व्यक्ति होइनन्, व्यवसायि हुन् । त्यसैले हाम्रो महासंघले प्रधानलाई हराएर ढकाललाई जिताउने निर्णय गरेको हो’ ती पदाधिकारीले जनतापाटीसंग भने ।
ढकाल पक्षबाट वस्तुगततर्फको उम्मेद्वार बनेका उमेश लाल श्रेष्ठ नेकपाको संस्थापक नेता पुष्पलाल र सहाना प्रधानका छोरा भएकोले पनि उनीप्रति स्वतः नेकपाको झुकाव रहनु स्वभाविक हो । महासंघको गत निर्वाचनमा ‘म कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य होइन, व्यवसायी मात्र हुं’ भनेका उमेशलाल अहिले भने आफूलाई विभिन्न फोरमहरुमा पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा चिनाउने गरेका छन् । ‘शायद उहांले नेकपाको सदस्य हुं भन्दा अलिकति भोट बढ्ने बुझ्नु भयो होला । त्यसैले कसैले तपाई नेकपाको सदस्य हो भन्दा स्विकार गर्नुहुन्छ । अघिल्लो चुनावमा म पार्टी सदस्य होइन, व्यवसायी मात्र हुं भन्नुहन्थ्यो’ एकजना व्यवसायीले भने ।
श्रेष्ठसंग प्रतिस्पर्धा गरेका पोखराका व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठको व्यवसायिक क्षेत्रका नेता नै मानिन्छन् । त्यसैले पनि नेकपा पङितको जर्वजस्त समर्थन उमेशलाललाई रहेको छ भने उनलाई कांग्रेस भित्रका अरु व्यवसायीले पनि समर्थन गरिरहेको बताइन्छ । ‘जसरी विपीका छोरा छोरी प्रति भनेपछि कम्युनिष्टवृतमा समेत एकखालको सहानुभूति देखिन्छ, कांग्रेसको पङितभित्र पुष्पलालको छोरा प्रति पनि त्यही आकर्षण देखिन्छ’ महासंघका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जनतापाटीसंग भने ।
मुकुन्द न्यौपानेदेखि गगन थापासम्म मैदानमा
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि नेकपाका नेता तथा पूर्व श्रम मन्त्री मुकुन्द न्यौपाने विशेष रुपमा खटिएका छन् । उनी पार्टीले गठन गरेको उद्योग व्यवसाय विभागका इन्चार्ज हुन् । उनले पार्टीको भातृसंगठन राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसंग मिलेर उवामहासंघमा नेकपा निकट उम्मेद्वारहरुलाई जिताउने, नेकपाका कार्यकर्ता उम्मेद्वार नभएको अवस्थामा राजनीतिकरुपमा तठस्थ उम्मेद्वारहरुलाई जिताउने रणनीतिका साथ चुनावि अभियान संचालन भैरहेको बताइएको छ ।
उता पार्टीको सभापति वा महामन्त्री बन्ने दौडमा रहेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा महासंघको चुनावी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासंघको निर्वाचनको विषयमा नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नगरेपनि थापाले भने चुनावि कमाण्डरकै हैसियतले काम गरिरहेका छन् । उनले खासगरि ढकाल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका आफ्ना टाढाका नातेदार प्रकाश सिंह कार्कीलाई जिताउनको लागि विशेष दौडधुप गरिरहेका छन् । कार्की गत आम निर्वाचनमा सोलुखुम्बुबाट प्रदेश सभा सांसदमा पराजित कांग्रेसका नेता पनि हुन् ।
त्यस्तै सोही समुहबाट चुनावि प्रतिस्पर्धामा रहेका गुण निधि तिवारी पनि नवलपरासीबाट प्रदेश सभा सांसदमा हारेका कांग्रेसका नेता हुन् । अहिले थापाले ढकाल समूहका कार्की र तिवारीबाहेक अरु प्राय सबै किशोर प्रधान समुहका उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु पनि महासंघको चुनावलाई ‘आफ्नो पक्षमा पार्न’ दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ ।
चार महिनापछि बस्याे पोखराको कार्यपालिका बैठक, कांग्रेसले गरेन हस्ताक्षर ६ मिनेट पहिले
सहकारीले नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउने ३४ मिनेट पहिले
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? ४९ मिनेट पहिले
बाढी पीडितका दुःख- लाखौं गुमाएर पाँच हजार राहत